विमान दुर्घटनामा बाँच्न सफल पाण्डे भन्छन्– ‘दुर्घटनाकै कुरा गरिरहँदा प्लेन खस्यो’ म ढोका नजिकै थिए उछिट्टिएर बाँचे की ? [भिडियोसहित] - pnpkhabar.com
You are at:Home»भिडियो»विमान दुर्घटनामा बाँच्न सफल पाण्डे भन्छन्– ‘दुर्घटनाकै कुरा गरिरहँदा प्लेन खस्यो’ म ढोका नजिकै थिए उछिट्टिएर बाँचे की ? [भिडियोसहित]
विमान दुर्घटनामा बाँच्न सफल पाण्डे भन्छन्– ‘दुर्घटनाकै कुरा गरिरहँदा प्लेन खस्यो’ म ढोका नजिकै थिए उछिट्टिएर बाँचे की ? [भिडियोसहित]
By पूजा बानियाँ on २९ फाल्गुन २०७४, मंगलवार १०:२४ भिडियो
काठमाडौ – ‘प्लेन ल्यान्ड भयो। खुसीले मन ढक्क फुलेको थियो। एक्कासी ड्याङ्ग आवाज आयो। त्यसपछि होसमा आउँदा त मेरो एउटा खुट्टा चलिरहेको थिएन। प्लेनतिर हेर्दा धुवाँ आइरहेको थियो’, विमान दुर्घटनाबाट बच्न सफल भएर मेडिसिटी अस्पताल भैंसेपाटीमा उपचार गराइरहेका ट्राभल एजेन्ट केशव पाण्डेले भने।
अस्पतालको इमर्जेन्सीमा उपचार गराइरहेका पाण्डेलाई मृत्युको नजिकैबाट गुज्रिएको त्यो समयको धमिलो सम्झना मात्रै छ। उनी भन्छन्, ‘प्लेन ठोक्कियो भन्ने महसुस हुँदै थियो, बेहोस भएछु। पछि होसमा आउँदा त म चौरमा थिएँ। माथिबाट पानी वा तेल केही खसिरहेको थियो।’ त्यही समय उनको मनले त्यहाँबाट दौडिन भन्यो। उनी दौडिन खोजे, तर दाहिने खुट्टा सर्नै मानेन।
‘बाँचियो भन्ने खुसी फेरि दुःखमा परिणत भयो। प्लेनतिर हेरेँ, प्लेनमा धुवाँ पुत्पुताइरहेको थियो। अब प्लेन पड्किन्छ जस्तो लाग्यो।’
यत्तिकैमा उनले नजिकै सेना र अरु उद्धारकर्मीहरु दौडिरहेका देखे। उद्धारका क्रममा उनलाई उठाएर गाडीमा राखियो। त्यसपछि फेरि बेहोस भएका उनी नेपाल लाइभकर्मी अस्पताल पुग्दा भर्खरै होसमा आएका थिए।